Semalt Expert: Karazana lahatsoratra fanamoriana ary manatsara azy ireo ho SEO tsara kokoa
Ny iray amin'ireo fitaovana fikarohana mendrika indrindra dia ny fampiasana vatofantsika lahatsoratra. Raha ampiasaina araka ny tokony ho izy, ny lahatsoratra fanamarinana dia afaka manatsara ny tranokalan'ny tranokala valin'ny fikarohana amin'ny valin'ny fikarohana (SERP).
Ho an'ireo izay tsy mahazatra io resaka io, dia manazava i Andrew Dyhan, Semalt Manager Success Manager, fa ny endriky ny soratra dia manondro ireo tarehin-tsoratra na soratra amin'ny sora-tanana amin'ny rohibe. Matetika ny tarehintsoratra / lahatsoratra dia amin'ny loko hafa avy amin'ny ambiny amin'ny votoaty ary indraindray no manazava. Rehefa manindry amin'ny lahatsoratra amina fanondro ny mpampiasa dia alefa any amin'ny toerana hafa izy - mobile 3d logo maker. Azonao atao ny mamorona ireo vatofantsika mampiasa HTML na CSS.
Nahoana no tena ilaina ny SEO?
Mety tsy ho malaza tahaka ny ankehitriny ireo lahatsoratra an-jatony raha tsy ampiasaina izy ireo amin'ny tanjon'ny backlinks. Manana andraikitra goavana amin'ny fampiasana backlinks (sehatra lehibe SEO) izy ireo. Ankoatra izany, mampiasa fitaovam-pifandraisana ireo tranonkala mba hanasaziana ny tranokalam-pifanakalozan-kevitra sy ny spamming. Izany no mahatonga ny manam-pahaizana SEO hahatakatra mazava tsara ny fomba hampiasana ireo lahatsoratra fanoroana mazava tsara.
Ny lohatenin-dahatsoratra dia manampy koa ho an'ny mpamaky ny votoaty satria manome azy ireo ny votoaty tokony hantenainy hahitana azy ireo ao amin'ny tanjona kinendry.
Karazana lahatsoratra fanitso
Misy karazany maro ny lahatsoratra fanonganana. Ireo manam-pahaizana SEO dia afaka mampiasa iray na maromaro amin'ireto karazana manaraka ireto mba hanatsarana ny votoatiny:
Ireo vatofantsika voafantina: Ireo manam-pahaizana momba ny varotra an-tserasera tafiditra amin'ny fananganana rohy mamorona endritsoratra amin'ny teny fanalahidy izay mifanandrify amin'ny teny fanalahidin'ny pejy web na rakitra sahanin'izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha te-hifandray amin'ny tranonkala iray izay manana votoatiny momba ny 'fanavaozana hevitra momba ny lakozia' ianao dia ampiasao ity fehezanteny manan-danja ity ao amin'ny hyperlinks
Taratasy fanondroana ankapobeny: Ireo dia rohy azo tsindriana izay mitarika anao amin'ny loharano izay mety ho fanampiana. Ny ohatra momba ireo vatofantsika manerantany dia ahafahana "mahazo fampahalalana bebe kokoa eto", "tsindrio eto raha hividianana maimaim-poana", "alao ny eBooko maimaimpoana eto" sy ny sisa.
Ireo vatofantsika voamboatra: Ny vatofantsika voamboatra no mampiasa ny marika hoe ny orinasan'ny tranonkala ho toy ny lahatsoratra. Izy ireo no heverina ho karazana vatofantsika azo ampiasaina indrindra. Izany no mahatonga ireo marika lehibe tahaka an'i Amazonia hampiasa laharana maro be marika amin'ny endriny, araka izay azo atao amin'ny votoatiny, satria kely kokoa ny mety hisian'ny fanatsarana.
Ny fampiasana fanavaozana dia ny fampiasana tafio-drivotra mitovy amin'ny pejy iray na ny endrik'ilay lahatsoratra mitovy amin'ny pejy maro ao amin'ny tranonkala iray. Mety hitarika mankany amin'ny famaizana amin'ny alalan'ny fitaovam-pitadiavana izy io satria ny pejy dia hita ho toy ny spammy ary tsy mahasoa. Tokony hohalavirina amin'ny fomba rehetra koa ny fanatsarana.
Ankolafy rohy tsy misy rindrina: Ireto avy ireo lahatsoratra fanoratana izay mampiasa ny URL an'ny tranonkala mba hiverina hiverina amin'io. Mora ampiasaina izy ireo saingy mila mizara tsara ao anaty votoaty. Ny lanjan'ny haran-kavina tsy mitongilana dia tokony tsy mihoatra ny 15%.
Sary sy 'alt' marika toy ny vatofantsika: Ny fampiasana sary eo amin'ny vohikala vohikala dia tena malaza androany. Izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa amin'ny votoatiny. Raha mampiasa sary ianao ho toy ny rohy mankany amin'ny toerana hafa, dia manome koa ny 'alt' marika misy ny sary. Ny raki-peo fandalinana dia mamaky ity marika 'alt' ity ho toy ny lahatsoratra fanoratana.
LSI (Fanamboarana Semantic Indexing): LSI dia midika fotsiny amin'ny fampiasana ny dikanteny sinoa (tsy voatery ho lavorary tanteraka) amin'ny teny fototra fototra. Izy ireo dia misy fiovàna akaiky amin'ny teny fototra. Tena mahasoa ireo vatofantsika LSI rehefa tsy te hampiasa ny teny fototra marina ao amin'ny rohy ianao.
Ny fiovaovana hafa amin'ny lahatsoratra fanonganana izay heverina ho azo antoka sy mahomby dia ny fampifandraisana ny vatofantsika marika sy tenimiafina. Amin'ity tranga ity dia mamorona rohy amin'ny anaranao sy ny teny fototra amin'ny safidinao ianao. Azonao ampiasaina, ohatra, "serivisy fanadiovana amin'ny alàlan'ny 'ny marikao'" amin'ny marika famantarana sokajy marika. "
Raha te-hahazo ny tsara indrindra avy amin'ireo lahatsoratra fanefitra ianao, dia ataovy izay azonao ampiasaina tsara. Tokony hozaraina araka ny tokony ho izy sy amin'ny lanjany marina izy ireo. Tokony ho fohy ihany koa izy ireo ary manan-danja amin'ny votoatin'ny pejy mifandraika sy lohahevitra. Ireo lahatsoratra momba ny endri-tsoratra spammy dia sari-bola mivantana ho an'ny famaizana satria izy ireo dia ireo vatofantsika izay tsy mahaloa voajanahary ao anaty lahatsoratra. Aza mampiasa loharanon-dahatsoratra toy izany ao amin'ny votoatinao toy ny fanararaotana ny SEO anao.